Nkọwapụta Ngwaọrụ - China Zhenyuan Steel Structure Engineering Co., Ltd.
Loglọ lọjistik na-ezo aka na ụlọ ndị pụrụ iche maka nchekwa na ngwa ahịa. Ogige lọjistik na-ezo aka n'otu ebe ebe akụrụngwa dị iche iche na ụdị ụlọ ọrụ logistics dị iche iche na-ekesara na oghere na mpaghara ebe ọrụ lọjistik gbakọtara na ebe ọtụtụ ụzọ njem jikọtara. Ọ bụkwa ebe a na-agbakọta maka ụlọ ọrụ lọjistik nwere oke ogo yana ọrụ ọrụ dị iche iche.
Iji mee ka mkpọchi okporo ụzọ dị n'obodo mepere emepe, belata nrụgide nke ụlọ ọrụ na gburugburu ebe obibi, na-ejigide njikọta nke ụlọ ọrụ, na-agbaso usoro mmepe nke ụlọ ọrụ lọjistik, na-achọpụta ire ụtọ nke ngwongwo, na mpaghara ala ịta ahịhịa ma ọ bụ ime obodo na mpaghara ime obodo. okporo ụzọ akwara, ọtụtụ lọjistik iche iche na kpụ ọkụ n'ọnụ njem, nchekwa, ahịa, ozi na njikwa arụ ọrụ kpebisiri ike. Site na mmụba nke nwayọ nke akụrụngwa dị iche iche na akụrụngwa ọrụ, na-enye atumatu dị iche iche dị iche iche iji dọta ebe obibi (nkesa) ebe a ga-ezukọta ebe a ma mee ka ha nweta elele bara uru na-arụ ọrụ dị mkpa na ijikọ ahịa ahụ na ịmara mbelata ego njikwa. N'otu oge ahụ, ọ belatara nsogbu dị iche iche nke nkesa nke nnukwu ebe a na-ekesa na etiti obodo wee bụrụ ụlọ ọrụ bụ isi na-akwado akụ na ụba nke oge a.
N'ime otu mpaghara, ọrụ niile metụtara ngwaahịa njem, lọjistik na nkesa, gụnyere njem mba na nke ụlọ, na-emezu site n'aka ndị ọrụ dị iche iche (OPERATOR). Ndị ọrụ a nwere ike ịbụ ndị nwe ma ọ bụ ndị mgbazinye ụlọ na akụrụngwa (ụlọ nkwakọba ihe, ebe a na-agbasasị, ebe a na-echekwa ihe, ebe ọrụ, ebe a na-adọba ụgbọala, wdg) e wuru ebe ahụ. N'otu oge ahụ, iji rube isi n'iwu nke asọmpi na-akwụghị ụgwọ, obodo na-ebu ibu ga-ekwe ka ụlọ ọrụ niile metụtara ezigbo ọrụ azụmaahịa ndị a kpọtụrụ aha ịbanye. Obodo na-ebu ibu ga-enwerịrị ụlọ ọrụ ọhaneze iji mezuo ọrụ niile a kpọtụrụ aha n'elu. Ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume, ọ ga-etinyekwa ọrụ ọha na eze maka ndị ọrụ na akụrụngwa ndị ọrụ. Iji gbaa ọtụtụ ngwongwo nke ngwongwo, ọ dị mkpa ijere obodo na-ebu ibu site na usoro njem dị iche iche dabara adaba (ala, ụgbọ oloko, nnukwu mmiri / ọdụ ụgbọ mmiri miri emi, osimiri na ikuku). N'ikpeazụ, ọ dị mkpa na otu ibu isi (RUN) ga-arụ ọrụ obodo na-ebu ibu, ma ọ bụ ọha ma ọ bụ nke onwe.
Loglọ lọjistik bụ nke ụlọ ọha. Site na mmepe ngwa ngwa nke oge, a na-ewepụta ụlọ akụrụngwa n'ụzọ pụrụ iche. Nanị ogige ntụrụndụ na-aga kpọmkwem n'ọdụ ụgbọ mmiri ma ọ bụ ọdụ ụgbọelu, ebe a na-ekesa naanị na-aga ebe dị iche iche na-ekesa, na-eme njikọta ngwa ahịa dị n'otu.
Isticslọ nkwakọba ihe na lọjistiiki
Isticslọ Ọrụ Nkesa Ngwaọrụ